दुईपांग्रे सवारी साधनको कर बढ्यो, अब कुनको कति ? » बुद्ध भूमि नेपाल
दुईपांग्रे सवारी साधनको कर बढ्यो, अब कुनको कति ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेशले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७८ ले मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको वार्षिक कर वृद्धि गरेको हो। विशेषत धेरै विक्री हुने सेग्मे न्टमा कर बढाइएको छ । १२५ सीसी इन्जिन क्षमता भएका दुई पाङ्ग्रे सावरी साधानले वार्षिक कर ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ ।
यसअघि १२५ सीसी क्षमताका यस्ता सावरी साधनले २ हजार ८ सय रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्दै आएका थियो । त्यस्तै १२६ सीसीदेखि १५० सीसीसम्मको मोटर साइकल तथा स्कुटरको कर ५ हजार रुपैयाँ बानाइएको छ । यसअघि १२६ देखी १६० सीसीसम्मका मोटर साइकलले वार्षिक ४ हजार ५ सय तिर्दै आएका थिए । आर्थिक ऐनले १२५ सीसीदेखी १५० सीसीसम्मको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर कर बढाएको हो ।
त्यसैगरी १५१ सीसीभन्दा माथि २२५ सीसीसम्म इन्जिन क्षमता भएका मोटर साइकलले अब ६ हजार ५०० बार्षिक कर तिनु पर्ने हुन्छ । यसअघि यी मोटरसाइकल तथा स्कुटरले बार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए । त्यस्तै यसअघि ९ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएको २२६ सीसीभन्दा माथि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक ११ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
यो सेग्मेन्टमा एकै पटक वार्षिक २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको छ। अब ४०० सीसीभन्दा माथि ६०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको वार्षिक कर भने बढाइएको छैन । यो सेग्मेन्टले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ । साथै, ६०० सीसीभन्दा माथिका मोटर साइकलमा पनि कर बढेको छैन । यो सेग्मेन्टमा सवारी धनीले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ ।